५ दिनमै कोरोना जितेका बिष्णु रिमाल भन्छन्, ‘बेसार,अदुवा पानी प्रशस्त पिएँ’:: Naya Nepal
५ दिनमै कोरोना जितेका बिष्णु रिमाल भन्छन्, ‘बेसार,अदुवा पानी प्रशस्त पिएँ’
रिमालले फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्।
कोरोनाको अनुभव व्यक्ति(व्यक्तिमा फरकफरक छ। कोही लक्षणसहितको संक्रमित हुनुहुन्छ। उहाँहरुको अनुभवले भन्छ- यसले पीडा दिन्छ, गाल्छ। ज्यानै गए अन्तिम अवस्थामा आफन्तहरुले मुखसमेत हेर्न पाउँदैनन्। कोही लक्षणबिनाको संक्रमित हुनुहुन्छ। हप्ता/दश दिनमा भाइरसमुक्त! उहाँहरुको अनुभवमा कोरोना त केही नै हैन रहेछ! पानीसानी खायो खलास्!
म पनि कोरोना संक्रमित भएँ। सतर्क रहँदारहँदै पनि कसरी संक्रमित भएँरु केवल अन्दाजै मात्र छ। लक्षणबिनाको संक्रमित-पहिलो दिन अलिअलि चिन्ता लाग्यो। आफ्नोभन्दा पनि आफ्नो परिवारका सदस्यको। संवेदनशील स्थान भएकाले आफूले काम गर्ने ठाँउको र होम आइसोलेसनमा रहेकाले छरछिमेकको!!!
मनमा आयो-अब के होला, अरुहरुले के सोचिरहेका होलान्रु कसैलाई केही भइहाले म कति दोषाी ठहरिउँलारु आदि।
मेरो अनुभवले भन्छ-कोरोना केही होइन भन्नु अतिरञ्जना हो। र, कोरोना लागेपछि सिद्दियो भन्नु त झनै उत्तेजनापूर्ण अफवाह हो। तरीका पुर्‍याउँदा यो महामारीको असर अति न्यून हुन्छ। लापर्बाहीमा ज्यानै जान्छ।
यस्तो बेलामा आउने सल्लाहरसुझावहरु पनि रंगिविरङ्गी हुन्छन्। मन आत्तिएका बेला आएजति सबै सल्लाह पालन गर्छु, भनेजति सबैथोक खान्छु भन्नेतिर लागियो भने भद्रगोलमा परिन्छ।
राष्ट्रका अति सम्मानित व्यक्तित्वदेखि विभिन्न तह र तप्काका मलाई माया गर्नुहुने आदरणीय शुभेच्छुकहरुले “छिट्टै निको हुन” दिनुभएको शुभकामनालाई आड भरोसाको रुपमा लिएँ। म मा अरु रोग केही थिएन। दुई चिकित्सकहरुले सुझाउनु भएको उपायले मज्जाले काम गर्‍यो।
एउटा रमाइलो गरौंरु संक्रमणको दोश्रो दिन लेखकरपत्रकार विजय कुमारले फोन गरेर भन्नु भयो– बधाई ब्रदर। मैले सोधें( कुन खुशीमारु उहाँले भन्नुभयो : २/४ दिनमा तपाई ठीक हुनुहुनेछ। त्यसपछि अरु असंक्रमितहरु भ्याक्सिन खाज्दै यताउता भौंतारिने छन्। तपाई आफ्नै शरीरमा पैदाभएको ‘एण्टीबडी’को बलमा ४/६ महिना शानसँग काम गर्न पाउनु हुनेछ। अहिले आराम गर्ने, मेरो किताब- सम्बन्धहरु, पढ्ने ब्रो। मन चङ्गा भयो-कोरोना सल्केर निको भएपछि त काइदाको फाइदा पो हुने रहेछ।
समुदायको कुन तहसम्म फैलिएको छ कोरोना ?
संक्रमण समुदायमा फैलिएको बारे अध्ययन शुरु
काठमाडौँ । सरकारले कोभिड– १९ को संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको बारेमा ‘एन्टिबडी’ परीक्षण गर्न थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा एन्टिबडी परीक्षणका लागि विज्ञसहितको प्राविधिक टोली शुक्रबारदेखि सातवटै प्रदेशमा खटाएको छ । काठमाडौँमा तालीमपश्चात टोलीलाई शुक्रबार प्रदेश खटाइएको हो ।
एन्टिबडी परीक्षणका लागि समुदायमा ‘सेरो प्रिभिलेन्स’ अध्ययन गरिने छ । टोली शुक्रबार सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुगेर शनिबार स्थानीय प्राविधिकसँग तालीमपश्चात आइतबारबाट रगतको नमूना सङ्कलन गर्नेछ । नेपाल अहिले संक्रमणको दोस्रो चरणमा रहेको छ । संक्रमित भएको व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण सर्नुलाई दोस्रो चरण मानिन्छ ।
गत चैतमा विदेशबाट कैलाली घरमा आएका एक जनामा व्यक्तिबाट घरमै रहेका अर्को स्थानीय व्यक्तिमा संक्रमण सरेपछि मन्त्रालयले नेपालमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको थियो । संक्रमणको तेस्रो चरण भनेको समुदायमा संक्रमण फैलिएको भन्ने हुन्छ तर नेपालमा कुनै खासखास ठाउँमा (क्लस्टर) मा संक्रमण फैलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“नेपालमा अहिले केही जिल्लाका खासखास ठाउँमा (क्लस्टरं)मा संक्रमण फैलिएको छ”, उनले भने, “अब समुदायको कुन तहसम्म फैलिएको छ भन्ने त अध्ययनबाट थाहा हुन्छ ।” गत माघ १० गते नेपालमा पहिलो पटक संक्रमण देखिएको थियो ।
अहिलेसम्म नेपालमा ९८ हजार ६१७ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यस्तै ७१ हजार ३४३ जना संक्रमणबाट निको भएको, ५९० जनाको निधन र २६ हजार ६८४ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।
यस्तै संक्रमित भएका र नभएकाको पनि एन्टिबडी परीक्षण गर्नेछ । महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत रामकुमार महतोले प्रत्येक प्रदेशका ३० वडामा रहेका मानिसको रगत नमूना परीक्षण गरिने बताए । उनका अनुसार एक वडामा १५ जनाको दरले नमूना परीक्षण गरिने छ ।
यसरी प्रत्येक प्रदेशमा ४५० जनाको दरले तीन हजार १५० जनाको नमूना सकलन गरी परीक्षण गरिने छ । उनले दशैँ अगाडि सबै नमूना सङ्कलन गरेर नमूना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिने बताए । कोभिड–१९ को संक्रमण सबै समूहका मानिसमा देखिरहेको र ट्राभल हिस्ट्रीमा नदेखिएका व्यक्तिमा पनि संक्रमण देखिन थालेपछि मन्त्रालयले समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिएको भन्नेबारेमा अध्ययन शुरु गरेको हो ।
अध्ययनका क्रममा जति प्रतिशतलाई संक्रमण देखियो त्यतिप्रतिशत नै नेपालमा संक्रमण फैलिएको भन्ने अनुमान गर्न सकिने महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत महतोले जानकारी दिए । “संक्रमणको सूचक हेर्दा अहिले समुदायस्तरमा नै हो कि भन्ने देखाउँछ”, महाशाखाका निर्देशक डा पाण्डेले भने, “तर अब अध्ययन गरेपछि मात्र समुदायमा संक्रमण छ वा छैन भन्ने पुष्टि गर्दछ ।”